57% Yevanhu Vari Kurumbidza Iwe Nekuti ... | Martech Zone
57% yevanhu havasi kukurudzira kambani yako nekuti une isina kunaka optimized nharembozha webhusaiti. Izvi zvinorwadza… uye tinoziva Martech Zone ndomumwe wavo! Kunyange isu tiine inonakidza nhare mbozha, isu tinoziva iyo Jetpack standard nharembozha ivoe kunorwadza kuona yedu saiti pa.
Sezvatinoramba tichishanda nevatengi vedu uye tichiongorora yavo analytics, zvave kujekera kwatiri kuti vatengi vedu vasina kugadzirirwa nharembozha vari kushomeka chaizvo panhamba uye nemhando yekushanya kwavari kuona kubva kune vashandisi vefoni. Vamwe, senge ino saiti, vane nhare-yakanangana nemusoro wenyaya uye isu hatisi kutomboona semhedzisiro sevatengi vedu vane nzvimbo dzinoteerera. Zvakatiita vatendi… zvakanyanya zvekuti tiri kushanda nevakuru dhizaini uye timu yekusimudzira paKubuda 31 pakuvaka musoro mutsva zvachose unoteerera.
Vazhinji venyu pamwe muri kuverenga izvi pa smartphone kana piritsi pane palaptop kana desktop (zvirinani zvinoenderana nema stats). Kunyangwe nekukasira kusimuka kunoshamisa kwe mobile - zvinoita kunge husiku - hakuna kuoma kunzwisisa. Tiri kurarama munyika matinoda Internet pamaoko edu, uye mafoni uye mapiritsi izvozvi zvave kugona kuendesa inoenderana (uye inoshanda) dhijitari ruzivo kupfuura akaremara malaptop uye desktops.
Iyi infographic kubva kuWSI ine zvese zviyero zvaunoda kuratidza kuti shanduko kune mobile-optimized mushandisi ruzivo
Nhare-Chete Internet Mushandisis - 23% yeUnited States nharembozha-chete. Izvi zvinoreva kuti ivo havatomboshandisa desktop kutsvaga uye kuwana ruzivo online.
Kutsvaga Kwenhare - 1 mu4 tsvagurudzo inoitwa pane mbozhanhare.
Mobile Usage - 98% yevanhu vanoshandisa nhare kubva kumba, 89% vachienda, 79% vachitenga, 74% kubasa uye 64% pakutakura veruzhinji.
Hazvishamise kuti muna 2015, mari inofungidzirwa pa kushambadzira nhare kuchasvika $ 400 bhiriyoni muUnited States moga!
Tags: Androidkubuda 31iPhonemobile optimizationmobile searchnharembozha webhusaitimobile-chete kushandiswainoteerera saitiSearch Engine Optimizationsmartphonepiritsiinoshandiswa sei nharewindows mobilewsi
Matipi ekunyora Mapepa eWepepa anotyaira Kutengesa